Dumarka Xiligaan Jiro Ma Jeclo Ragga Wanaagsan Maxaa Sababay..(Akhriso Sababta) - iftineducation.com
Gabdhaha qaar ma jecla wiilasha wanaagsan … waxay jecelyihiin wiilasha xun xun ee sida xun ula dhaqma.. ma jecla wiilasha marwalba garabkooda jooga ee caawinaya ee sida xad dhaafka ah u jecel.
Waxay jecelyihiin kuwo macangag ah ee qalbiga adag ee marwalba kadeeda.
Kuwa adag oo iyaga silciya ~~ kuwaas oo xitaa iyaga naqaska ku dhajiya ~~~ kuwaas oo balan been ah u sheega marwalba ~~~ kuwaas oon dan kalahayn afkaartooda ~~ kuwaas oon wakhti yarna siinaynin iyaga ~~ kuwaas oo marwalba ugu hanjaba inay furayaan iyaga ~~ kuwaas oo marwalba yasa iyaga ~~~~ kuwaaas oo micna ugu fadhiyin iyaga joogitaankooda ~~ kuwaas jacaylkaba ka siiqaadaya micno darro.
HAGAAG: walaal an wax kudhaho
Wax ka khaldan ma jirro wiilasha wanagsan… xaqiiqdii adiga ma ahan ruuxa dhibka wada ee waa gabadhaas danaheeda iyo rabitaanka ee dookha ay ka rabto nimanka.
Ha isu badalin si dhibyar si aad saqajaan u noqoto Sababtoo ah waxay rabtaa inaad iyada darteed isubadasho~~~~~~iska ahow sidaad tahay hada…. hadayna dhinacaga usoo leexanaynin ha ku dhaaftee iskadaa.
Waxaad heli doontaa shaqsi kale oo sida aad tahay kugu mahadnaqaya iyo sidaad wiil wngsan u tahay.